Hogaamiye Awood Badan Oo La Jabsaday Telfoonkiisa iyo Sababta? • Oodweynenews.com Oodweyne News
Kismaayo: Ciyaaryahano U Geeriyooday Qarax Miino Oo Lala Beegsaday Bas Ay Saarnaayeen
Warbixin: Isbadalka Hanaanka Dhaqanka Soomaalida
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo London Kulan La Yeeshay Ra’isul Wasaaraha Britain Boris Johnson
Xildhibaan Ka Tiran Xisbiga Waddani Oo Taagero U Muujiyey Musharrixiinta Kulmiye
Gabadh Yar Oo 16 Jir Oo Kufsi Wadareed Loogu Gaystay Deegaanka Wajeer Ee Kenya
Rag Ceel Qodayay Oo Si Lama Filaan Ah U Helay Dhagax Jooga 100 milyan oo dollar.
Dadweynaha Boorama Oo Ka Hadlay Loolanka shir gudoonka Wakiilada Somaliland
Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Dagaalada Tigray Ee Dalka Itoobiya
Jaamac Karaaciin”Cid Iga Joojin Karta Heesaha Ma Jirto”
Xisbiga Kulmiye Oo Ka Shakisan Xildhibaan Dalka Dibadda Uga Dhoofay Wakhtigan Adag
Hogaamiye Awood Badan Oo La Jabsaday Telfoonkiisa iyo Sababta?
News DeskJuly 21, 2021
Qaar badan oo hogaamiyaasha caalamka iyo dadyow kale oo caan ah ayaa laga jabsaday telfoonadooda gaarka ah , waxaana dadkaasi laga ogaaday xogo qarsoodi u ahaa oo ugu keydsanaa telfoonadooda gaarka ah.
Hogaamiyaashan la jabsaday telfoonafooda ayaa lagu weeraray barnaamij ama Software wax lagu basaaso oo laga leeyahay Israa’iil, waxaana hada soo baxaya hogaamiyaal iyo shaqsiyaad badan oo dhibane u ah weerarkan .
Warbaahinta waa weyn ayaa tabineysa in Software-ka oo loo yaqaan Pegasus ee loogu tala galay in wax lagu basaaso in loo isticmaalay weerarka dhinaca telfoonka ee lagu jabsaday xogaha hogaamiyaasha loo dhacay.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka mid noqday dhowr hoggaamiye oo caalamka ah oo la rumeysan yahay in la taleefoonadooda la bartilmaameedsaday oo la isku dayay in la jabsado iyadoo la adeegsanayo softwerka Pegasus.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in la basaasay ugu yaraan 50,000 oo qof oo caan ah oo daafaha dunida kunool, waxaana dadkaasi la basaasay telfoonadooda la ogaaday xogaha gaarka ah ee ugu jira telfoonada ay isticmaalaan.
Shirkada iska leh softwerka Pegasus ee lagu magacaabo NSO ayaa beenisay wararka sheegaya in barnaamijkeeda loo adeegsaday si qaldan, waxa ayna shirkadu sheegtay in barnaamijkan ay dowladaha badan ka iibisay uu yahay mid loogu talagalay in lagu dabagalo dambiilayaasha iyo kooxaha argagixisada.
Wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiiska ayaa ku warramay in sirdoonka Marooko ay ogaadeen taleefoonka uu Mr Macron isticmaalayay tan iyo 2017-kii, hasa ahaatee Morocco ayaa beenisay in ayba adeegsato barnaamijka Pegasus.
Telfoonada madaxda caanka ah ee la jabsaday waxaa kamid ah madaxweyaasha dalalka Ciraaq Baram Salih, madaxwaynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, iyo sidoo kale ra’iisul wasaarayaasha dalalka Pakistan, Masar, iyo Boqorka dalka Morocco.